musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Martinique Kupwanya Nhau » Martinique inovhurazve denga rayo kundege dzeAir Canada
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Caribbean • Hurumende Nhau • Martinique Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Martinique inovhurazve denga rayo kundege dzeAir Canada.
Sevhisi yemhepo kuFort-de-France ichapihwa zvakanyatsoenderana nehutsanana matanho, kuve nechokwadi chekugara kwakachengeteka muIsle of Flowers.
Kubhururuka kwakananga kwevhiki nevhiki kubva kuMontreal kuchashandiswa kutangazve sevhisi kuMartinique nendege yemhando mbiri dzeB737 ine zvigaro zana nemakumi matanhatu.
Izvi zvinoratidza kuti yakawanda sei Martinique uye yese French West Indies yakakosha kwatiri kuAir Canada.
Iyi nzira yehungwaru ichashandiswa kusvika kashanu pasvondo pachizvarwa chitsva Boeing-737 ndege.
Air Canada yakadzokera Martinique kutanga Gumiguru 30, zvichitevera mwedzi yakati wandei yekukanganiswa kwebasa nekuda kwedenda.
Ndege yakananga vhiki nevhiki kubva kuMontreal (YUL) ichashandiswa kutangazve sevhisi Martinique nendege yemhando mbiri yeBoeing 737 ine zvigaro zana nemakumi matanhatu nepfumbamwe, zvese zvakashongedzerwa nemasikirini ega ega anobata-bata izvo zvinopa mukana kune yakazara varaidzo system, kusanganisira mafirimu, zvinyorwa, mimhanzi, nemitambo.
"Tinofara kudzoka Martinique"Akadaro Alexandre LEFEVRE, Air Canada's Senior Director network kuronga.
“Izvi zvinoratidza kuti zvakadii Martinique uye yose yeFrench West Indies yakakosha kwatiri Air Canada, sezvo takagadzira hukama hwakasimba munharaunda kwemakore anopfuura 45 ikozvino. Zvakawanda seMartinique inzvimbo inozivikanwa yezuva kuQuebecers, Quebec inzvimbo inoyevedza yevaMartinican vachitsvaga kuzorora, dzidzo yepamusoro, uye mikana yebhizinesi. Iyi nzira yehungwaru ichashandiswa kusvika kashanu pasvondo pachizvarwa chitsva Boeing-737 ndege. Tiri kutarisira kukuchingamidzai muchikepe."